”Heshiiska aannu garoonka Boosaaso ku wareejinnay lagama wada hadlin!” – MW Deni oo sheegay kelmad shaki abuurtay! | Hadalsame Media
Home Maqaallada ”Heshiiska aannu garoonka Boosaaso ku wareejinnay lagama wada hadlin!” – MW Deni...
”Heshiiska aannu garoonka Boosaaso ku wareejinnay lagama wada hadlin!” – MW Deni oo sheegay kelmad shaki abuurtay!
(Hadalsame) 26 Sebt 2019 – Boosaaso ma jasiirad ka tirsan imaaraadkaa? Madaxweynaha puntland Said Abdullaahi Denni waxuu sheegay in garoonka boosaaso ku wareejinayaan shirkad laga leeyahay imaaraadka, waxaa la waydiiyay meeqa sanno ayay maamulaysaa garoonka shirkada lagu wareejiyay?
”Heshiiska aannu garoonka ku wareejinnay lagama wada hadlin!”
Waxuu ku jawaabay arrintaas lagama wadda hadlin! Waxaan ognahay heshiis kasta oo la galayo waxaa aasaas iyo saldhig u ah waqti uu bilaamayo iyo waqti uu dhamaanayo, hadaba see ku dhici kartaa ayada oo aan laga wada hadlin wakhtiga in shirkad lagu wareejiyo garoonka!
Waa qeyb ka mid ah masuuliyad darro iyo musuq maasuq dalka iyo dadka loo hor seedayo, haddii taasi dhacdana waxay hor seedi doontaa in shirkadaas muran galiso lahaanshaha Garoonka.
Taas oo aan si sahal ah ugu soo celin doonin gacanta maamulka maadaama si aan heshiis wakhti ku salaysan ahayn gacanta loogu galinayo maamulka garoonka.
FG: Bishii Oktoobar 2017-kii waxaa Dekedda magaaladda Boosaaso heshiis in ay dhisaAn ah lagula galay shirkada DP World oo Imaaraadka laga leeyahay taas oo muddo 30 sanno ah maamuli doonta Dekadda sida heshiisku dhigayay, sidoo kale waxaa heshiiska ka mid ahayd in ay muddo sannad iyo bar ah ku bilaabaan dhismaha Dekadda taas oo weli aan wax ka hirgalay jirin.
Haddaba maxaa laga filan karaa wareejinta garoonka diyaaraddaha ee Boosaaso oo lagu wareejinayo shirkad Imaaraadka laga leeyahay?
W/Q: Saciid Muuse Shire
Previous articleDHEGEYSO: ”Lama wada yeelan karo adeeg DHAKHTAR & FARMASHIYE” – Maxay Somalia arrintan ka qaadan kartaa?!
Next articleTOOS u daawo: Khudbadda Madaxwaynaha Somalia ee Golaha Guud ee QM – LIVE